महिला क्रिकेट ः नेपालद्वारा मलेशिया पराजित | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home समाचार खेलकुद महिला क्रिकेट ः नेपालद्वारा मलेशिया पराजित
Female cricket. Abstract woman batsman playing cricket.
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी आइसिसी महिला टी–ट्वान्टी विश्वकप एशिया छनोटमा नेपालले मलेशियालाई पराजित गरेको छ । जीतसँगै नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ ।
विश्वकप एशिया छनोट अन्तर्गत शुक्रवार भएको आफ्नो चौथो खेलमा नेपालले मलेशियालाई ६ विकेटले पराजित गरेको हो । मलेशियाले नेपाललाई जीतका लागि ९३ रनको लक्ष्य दिएको थियो । उक्त लक्ष्य नेपालले १८ दशमलव २ ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै पूरा ग¥यो । जीतसँगै नेपालले आगामी वर्ष हुने टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोटमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। नेपालको जीतमा सीता रानामगरले सर्वाधिक ३० रनको योगदान दिइन् । कप्तान रूविना क्षेत्रीले २०, सरिता रानामगरले १५, कविता कुँवरले १० तथा इन्दु बर्माले चार रन बनाए ।
त्यसअघि दुबईस्थित आइसिसी एकेडेमीको मैदानमा टस हारेर ब्याटिड्ढो निम्तो पाएको मलेशियाले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर ९२ रन बनाएको थियो । मलेशियाका लागि एल्सा हन्टरले अविजित ३९ रन बनाइन् । मास इलिएसाले १४ तथा युसरिना याकोपले १२ रनको योगदान दिए ।
बलिङतर्फ नेपालकी सबनम राईले दुर्ई तथा कविता कुँवर, सीता रानामगर र कप्तान रूबिना क्षेत्रीले एक/एक विकेट लिए । नेपाल चार खेलमा तीन जीत र एक हारका साथ ६ अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा पुगेको छ । नेपाल पहिलो खेलमा हड्ढङसँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा भुटानलाई ८ विकेटले पराजित गरेको थियो ।
त्यस्तै, नेपालले तेस्रो खेलमा कुवेतलाई ९ विकेटले हराएको थियो । तीन खेल खेलेको युएई शतप्रतिशत नतीजाका साथ ६ अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ । रन रेट बलियो भएका कारण नेपाल शीर्ष स्थानमा छ । नेपालले अन्तिम खेल आइतवार युएईसँग खेल्नेछ ।
Previous article‘ए’ डिभिजन लिग ः सातदोबाटोद्वारा थ्रीस्टार पराजित
Next articleमहावाणिज्य दूतावासले भारतीय संविधान दिवस मनायो